Ogaden News Agency (ONA) – Mudaharad aad u baladhan oo ay Jaliyada Ogadenya ee Minnesota kagala hortag tagtay Dhagar qabe Cabdi Iley.
Mudaharad aad u baladhan oo ay Jaliyada Ogadenya ee Minnesota kagala hortag tagtay Dhagar qabe Cabdi Iley.
Maanta oo Axad ah 3/23/15 ayay Jaliyada Ogadenya ee gobolka Minnesta iyo Jaliyado kale oo kayimid gobolada Midwestiga sida gobolka Masuri ay ku qabteen badhatamaha magalada Minneapoilis mudahrad aad u baldan. Mudaharadkan oo sifiican lo soo ababulay ayaa waxay u jeedadiisu ahayd in lagu canbareyo dhaqar qabe Cabdi Iley oo isagu si dhumasha ah wadanka Maraykanka ku soo galay.
Hadaba waxaa mudaharadkan ka soo qab galay boqolalan rux oo dawalba isugu jira oo ah shacabka Somalida Ogadenya ee jecel samaha kana gilgilatay gabood falada uu gumaysiga Ethipia ku hayo Shacanka Ogadenya ee aan waxba galabsanin.
Laga soo bilabo werarkii Dhagar qabe Cabdi Iley lagu qaday Washington DC iyo werarkii ka dhacay gagida diyarada Minneapolis a iyo waliba mudaharadkii baladhnaa ee manta ayaa waxa uu safarkani uu cabdi Ilay u ahaa safar guuldaro ay karacday oo ceebtisa intee horay u taqanay iyo in kaloo badanba ay ku Ogaden garad xumidiisa.
Hadaba Ayadoo ay jawiga hawaduu aad u qabobayd ayaa halgamayaasha Jaliyada Ogadenya ayana u jixinjixin barafkii dhacayay manta balse ay u dhabar adaygeen ayago mujiyay tagerada ay u hayaan halgankooda xaqa ag ee ay hogaminayaso JWAXO.
Mudaharadkan ayay dadku ku tilmamen kii ugu baldhnaa abid oo ka dhacay gobolkani Minnesota wuxuna argagax ku riday dhaqar qabayashii gacan yaraha u ahaa gumaysiga Ethiopia
oo uu qadhwaden ka ahaa dhagar qabe Cabdi Iley.
Wargayska maxaliga ah ee lagalaheehay gobolka minnesota ayaa wax ka qoray mudaharadkii manata wuxuna yidhisidatan hoos kafiiri maregta Sartribune.com.